Faah faahino dheerada oo kasoo Baxaya Qarax Muqdisho ka dhacay. – Geelle Magazine
Home » Muqdisho Wararka
Faah faahino dheerada oo kasoo Baxaya Qarax Muqdisho ka dhacay.
ahmedzaki Posted On October 1, 2020
Qarax khasaare dhimasho iyo dhaawac leh dhaliyay ayaa goor dhaweyd waxaa uu ka dhacay Magaalada muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waxaana la sheegay in qaraxaasi lagu bartilmaameed saday Ciidanka dowladda.
Wararku waxaa ay sheegayaan in qaraxu uu ka dhacay halka loo yaqaanno Daallo oo ka tirasan Degmada Howl-wadaag ee Gobolkani Banaadir, waxaana la eegtay Ciidamo ka tiranaa Dowladda gaar ahan kuwa Nabad Sugidda oo halkaasi ku sugnaa.
Qaarxa waxaa fuliyay qof haweenay ah oo sida la sheegay isku soo xirtay waxyaabaha Qarxa, isla mar kaana isku qarxisay goob ay ka ag dhawaayeen Ciidan dharcad ah oo ka tirsan Nabad sugidda Soomaaliya.
Inta la xaqiijiyay hal Askari ayaa ku dhintay, waxaana ku dhaacmay tiro intaas ka badan oo isugu jira dad shacab ah iyo Ciidanka dowladda.
Ciidamo ka tirsan Dowladda ayaa gaaray goobta uu qaraxu ka dhacay waxaana istaagay isku socodka guud ee goobta